ဆောင်းရာသီမှာ ဘာလို့ အစားပိုစားချင်ကြတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
ဆောင်းရာသီမှာ ဘာလို့ အစားပိုစားချင်ကြတာလဲ?
အချစ်နဲ့ ဦးနှောက်- သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဦးနှောက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ?
အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ခံရစေမယ့် ရိုးရှင်းသော ဆွဲဆောင်နည်း (၈) ချက်
သူက ဒီအရာတွေကို မလုပ်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ ထာဝရလူဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
အသက် ၅၀ ဘဝမှာ ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ အသက် (၂၀) အရွယ်မှာ ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာ(၅) ချက်
ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း မပြောသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄ ချက်
ရှင်သန်မှုအတွက် အမှန်တကယ်မလိုအပ်သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု
ဘာကြောင့် နေ့စဉ် Alcohol အနည်းငယ်ကို သောက်သုံးပေးသင့်တာလဲ?
သင့်အား ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် Stephen Covey ရဲ့ကိုးကားချက် (၄)ချက်
အဝတ်အစားတွေနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို လိုက်ဖက်ညီစွာ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်များ
ဆောင်းရာသီအတွင်းမှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဗိုက်ပိုဆာနေနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီဆိုတာလည်း ပူပူနွေးနွေးအစားအစာတွေ စားလို့ကောင်းတဲ့ ရာသီပါ။ ဆောင်းရာသီမှာ လူတွေဟာ တခြားရာသီတွေထက် အစာစားချင်စိတ် ရုတ်တရက် ပြင်းထန်လာရတဲ့ အခြားအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် ပိုစားဖြစ်တာလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
၁။ အေးတာကို ခံစားရနိုင်လို့ပါ
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အလိုလို နွေးထွေးသွားစေဖို့ ကြိုးစားရတာကြောင့် ကယ်လိုရီတွေ ပိုသုံးစွဲလာရပါတယ်။ ဒီအတွက် အစားထိုးဖို့ နွေးထွေးပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ အဆီများသော အရာတွေကို ပိုပြီးတောင့်တလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလိုအစားအစာတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝအတိုင်း နွေးထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ ဟင်းလျာတွေမှာ ပရိုတင်းနဲ့ အမျှင်ဓါတ်လုံလောက်အောင် ထည့်ပါ။
၂။ အထဲမှာ အနေများလေ့ရှိလို့ပါ
အရမ်းအေးတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေတဲ့သူတွေဆိုရင် အားလပ်ရက်အတွင်း အိမ်ထဲမှာသာ နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ အေးတာကြောင့် သွေးလေးပြီး ပုံမှန်ထက် တတ်ကြွမှုနည်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ အိပ်ရာပေါ်မှာသာ နွေးနွေးထွေးထွေးကွေးရတာကို ကြိုက်ကြမှာပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ သင်ဟာ ပျင်းလာတာကြောင့် ပုံမှန်ထက် ပိုစားမိနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲနေဖို့ စဉ်းစားထားရင် ဝိတ်တတ်မလာအောင် ကိုယ့်ဘာသာ activity plan တစ်ခုအမြဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ကခြင်း၊ အိမ်ထဲမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သို့) အိမ်ပတ်ချာလည် လမ်းလျှောက်ခြင်းတွေက ကယ်လိုရီအပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ရာသီဥတုက အရမ်းအေးတဲ့အခါ အရည်ပိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ ဝိတ်ထပ်ပိုနိုင်တဲ့ ပိုနွေးတဲ့ အဝတ်တွေ ထပ်ဝတ်လေ့ရှိပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အလုပ်ပိုလုပ်ရပါတယ်။ ဒါက ချွေးပိုထွက်လာစေသဖြင့် ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်တဲ့အခါ ပိုဆာလောင်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပြီး ပိုစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ drinking schedule တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့အရည်စားသုံးမှုကို တိုးမြှင့်ပါ။ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ပန်းသီး စတဲ့ အရည်ရွှမ်းသော အသီးတစ်ချို့ကို သင့်အစားအသောက်ထဲ ထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
၄။ ဆောင်းရာသီ စိတ်မရွှင်ပျခြင်း ဖြစ်နိုင်လို့ပါ
ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုက သင့်စိတ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ပိုဝမ်းနည်းစေပါတယ်။ အစားအစာက ကျွန်မတို့ကို စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ သူက ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ dopamine ဟော်မုန်းကို ထုတ်လွှတ်ဖို့ ကူညီတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာ အရသာရှိသော အရာတစ်ခုခုကို တောင့်တခြင်းက သဘာဝသာဖြစ်ပါတယ်။ အဆီများသောငါး၊ အနက်ရောင်ချောကလက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ ဘယ်ရီသီးများ၊ ကွေကာအုတ်များ၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့များ၊ ပဲအမျိုးမျိုး ကဲ့သို့သော သင့်စိတ်ခံစားမှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပါ။
သင့်ရဲ့ “လက်တွဲဖော်”ကို ရှာတွေ့တဲ့အခါ နှလုံးသား ပါဝင်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပေမယ့် ဦးနှောက်က ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနှင့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တခြားခံစားချက်တွေ ခံစားလာစေဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတော့ အချစ်နဲ့ သင့်ဦးနှောက်ကြားက တုံ့ပြန်မှုကို လေ့လာပြီး ချစ်မိတဲ့အခါ သင့်စိတ်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ...
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ realationship သက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနားမှာရှိနေပေမယ့် မိုင်ထောင်ချီဝေးသနေလိုမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သက်တမ်းရှည်ကြာလာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်တမ်းရှည်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမှ ာဝေးကွာသလို ခံစားနေရတာက ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် အရမ်းထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။ ချစ်စခင်စကြင်နာစမှာ...
သင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ အမျိုးသားတွေဟာလည်း ကိုယ်တွေလိုချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ ထပ်တူ သူတို့လည်း လိုချင်ပတယ်။ တစ်ခုရှိတာက သူတို့ဘက် ကြီးမားသော အပေးအယူတွေမလုပ်ကြခြင်းပါပဲ။ သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး သူတို့အချစ်ခံရဖို့ဆိုရင် ဒီရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ နားထောင်ပါ၊ သူ့ကို...
၁။ သူဟာ တကယ်တော့ သင့်ရဲ့ အနာဂတ်တွေအကြောင်း အတူတကွ စဉ်းစားတွေးတောပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် သူက လှည့်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် သင့်ကို အပြည့်အဝအလေးအနက်ထားနေပါတယ်လို့ ပြောဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ၂။ ချိန်းတွေ့ဖို့ ကိစ္စအဝဝစီစဉ်တဲ့အခါ အားသွန်ခွန်စိုက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ (တစ်ခါတလေ...